Xiddiga Liverpool ayaa ka tagaya kooxda
Suuqa kala iibsiga Yurub ee bishii Janaayo ayaa si rasmi ah u furmay horaantii bishii Janaayo 2021 kooxaha ayaana doonaya inay hirgeliyaan qorshayaashooda ka hor suuqa.
Manchester United ayaa aaminsan inay heli karaan 20 jirka Jusson Sancho ee garabka ka ciyaara Borussia Dortmund wax ka yar 100 100 milyan sanadkan. (90 daqiiqo)
Maamulaha ugu dhaw ee kooxda PSG Mauricio Pochettino ayaa la soo saxiixday laba ciyaartooy oo lala xiriirinayo kooxdii hore ee Tottenham maamuleysay dhowr delle Ali same oo ka kala tirsan Tottenham iyo Inter Milan iyo Christian Eriksen. (AS)
Liverpool ayaa bedeshay garabka Xherdan Shaqiri, oo 29 jir ah, umana ogolaan doonto inuu ka tago kooxda bisha Janaayo. (Liverpool Echo)
Arsenal ayaa ku biirtay liiska kooxaha Premier League ee xiiseynaya ciyaaryahanka khadka dhexe ee Celtic Ryan Christie (25 jir) waxayna rumeysan yihiin in Kieran Tierney hore uu uga dhaadhicin karo inuu ku biiro Emirates. (90 daqiiqo)
Sikastaba, Mikel Arteta ayaan wali hubin in Mesut Ozil uu garoomada kusoo laaban doono bisha Janaayo. (Sky Sports)
Tababaraha Tottenham Jose Mourinho ayaa sheegay inay layaab noqon laheyd hadii lagu daro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo wuxuuna ku adkeysanayaa inuusan weydiisan doonin saxiixyo cusub gudoomiyaha Daniel Levy. (Heerka)
Tababaraha Crystal Palace Roy Hodgson ayaan ka walwalsaneyn kordhinta qandaraaska Wilfred Zaha, iyadoo AC Milan iyo PSG ay yihiin labadii koox ee ugu danbeysay ee lala xiriirinayay 28 jirkaan. (Boostada)
Borussia Dortmund ayaa xiiseyneysa 18 jirka garabka uga ciyaara Manchester City Jayden Braaf. (Sawir, emayl ahaan)
Tababaraha Real Madrid Zinadine Zidane ayaa diiday wararka sheegaya in Luka Modric, Sergio Ramos iyo Lucaz Vazquez ay diyaar u yihiin inay ka tagaan kooxda. (Hadalka Kooxda)
Daafaca Arsenal Rob Holding, oo 25 jir ah, ayaa ku dhow inuu heshiis cusub oo waqti dheer ah la gaaro kooxda, isagoo meesha ka saaray dhammaan xiisaha kooxaha Premier League ee amaahda ah. (Telegraph)
Tababaraha Chelsea Frank Lampard ayaa bartilmaameed u ahaa bisha Janaayo iyo suuqa kala iibsiga laakiin waxa ay u badan tahay inuu hoos u dhigi doono qandaraaskiisa haatan ee uu lacag ku qarashgareynayo. (Hadaf)
Juventus ayaa raadineysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Shandong Luneng oo 35 jir ah Graziano Pelle, kaasoo sidoo kale lala xiriirinayay West Ham United. (Hadaf)
21 conferences to get 2021 off to a superb birth
4 Shirkadaha ayaa ogolaaday inay kordhiyaan qiimaha